Uyitshintsha njani ifonti kwi-Instagram: Iindlela ezahlukeneyo zokuyitshintsha | Abadali be-Intanethi
I-Instagram sesinye sezona zicelo zisetyenziswa kakhulu ngabantu abafikisayo kunye nabantu abadala. Siyayazi indlela yokupapasha umfanekiso kunye nombhalo ohamba nomfanekiso, sinokufaka nebali elibonisa into esiyenzayo ngamaxesha onke. Kodwa ngaba siyayazi ngokwenene indlela yokutshintsha ifonti?
Kwesi sifundo sichaza ngokufutshane ukuba siyintoni na esi sixhobo, ukuba awukangeni kwihlabathi laso okwangoku, kwaye ngokunjalo Sikwakubonisa isifundo esinamanyathelo alula apho unokuguqula ifonti ngendlela othanda ngayo kwaye ngale ndlela, ukukwazi ukwenza umntu ngakumbi esi sixhobo esiye saba sefashonini.
2.3 Ungayitshintsha phi ifonti
3 Izicelo zokutshintsha ifonti
3.2 ibhodi yefonti
Umthombo: Ingcali yakho
I-Instagram ichazwa njengenethiwekhi yoluntu kunye nesicelo esinenjongo ukukwazi ukupapasha zombini imifanekiso kunye neevidiyo apho unokufaka khona iziphumo ezingapheliyo zeefoto ezinjengezihluzi, imibala, njl. Imifanekiso kunye neevidiyo zinokwabelwana ngazo zombini kwiqonga nakwamanye amanethiwekhi oluntu.
Esi sicelo sesona sisetyenziswa kakhulu kwinethiwekhi yoluntu namhlanje, njengoko ifikelele kubaphulaphuli abohlukeneyo, ukusuka kwabaselula, abafikisayo kunye nabantu abadala.
Le yenethiwekhi yoluntu kunye ngaphezulu kwe-1000 yezigidi zabasebenzisi Isetyenziselwa ukwabelana ngemifanekiso kunye neevidiyo, ukusebenzisa izihluzi kwaye ngaloo ndlela ufumane ifoto ethathwe ngeselfowuni ukuze ibe ngumfanekiso wobuchwephesha.
Into ephawula esi sicelo kukuba sikwayilelwe urhwebo lwe-intanethi, kwaye ngoku luba luhlobo lwemarike yehlabathi kuba inokufikelela kumaphepha ewebhu angaphandle.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, zinikezele ekufotweni nasekuphekeni, unokwenza iprofayile yakho yorhwebo yoluntu, ngale ndlela. I-Instagram ikuxelela ngokukhula yeshishini lakho kwaye uvumele upapasho ukuba lufikelele kwinani eliphezulu lotyelelo.
Ngamafutshane, ukuba ufuna ukukhula kwaye awazi ukuba njani, esi sicelo sikunika iindlela ezahlukeneyo zokukhetha ukuze uphucule umsebenzi wakho wemihla ngemihla. Njengakuzo zonke iinethiwekhi zentlalo, kufuneka unxibelelane nabantu onomdla ekukulandeleni.
Yenza isihluzo ngama-hashtag kwaye ulandele iiakhawunti ezibonakala zinomdla kuwe, ukuze zikuqaphele, zinike "ukuthanda" kupapasho lwabo okanye wenze izimvo. Kungenzeka kakhulu ukuba baya kukulandela emva kwakho.
Kubalulekile ukuba ukuba wenze iakhawunti yokuthengisa ukukhuthaza ishishini lakho, gcina abasebenzisi bakho benomdla kwiindaba zakho upapasho, iireli, amabali, imifanekiso okanye iividiyo kwiqonga lakho okanye wabelane ngomsebenzi wabanye abasebenzisi.
Sebenzisa into esiyaziyo njengee-hashtag, oku kuvumela uluntu lwe-Instagram ukuba lubone upapasho lwakho kwaye lungakwazi ngcono ukuqonda umsebenzi wakho.
Fumana ukuphefumlelwa ngabanye abasebenzisi kwaye ugcine ukulandelela okuhle ngomsebenzi wakho. Kwakhona gcina i-algorithm yakho isebenza, oku kuvumela i-Instagram ikunika isakhono sokukucebisa kwaye ndikubonise imisebenzi ehambelana neyakho.
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, Sebenzisana nabasebenzisi bakho kwaye nabantu obalandelayo, phawula kwizithuba zabo, kwaye kuya kuhambelana.
Into yokuqala ekufuneka siqale ngayo khangela ijenereyitha yomgca. Kukho iisayithi ezininzi onokuthi uzindwendwele apho zinoluhlu olubanzi lwemithombo. Ezi zezinye zeejenereyitha onokuzifumana:
Iileta kunye neefonti
Inyaniso kukuba, bonke banomsebenzi ofanayo, kodwa i-Meta Tags ivumela umboniso wemvelaphi. Ngale ndlela unokujonga kwasekuqaleni ukuba uyathanda ukuba udidi oluthile lujongeka njani. Ngoku masiqhubeke nesifundo.
Chwetheza kumbhalo ofuna ukuwutshintsha kwaye izixhobo ziya kukubonisa uluhlu lweefonti ezikhoyo. Unokukhetha eyona uyithanda kakhulu okanye ehamba nobuntu bophawu lwakho. Nje ukuba ukhethe, cofa kwindawo ethi "Kopisha".
Yiya kwiakhawunti yakho ye-Instagram kwaye ufake ukhetho "Hlela iprofayile"
Ncamathisela ifonti kwicandelo elithi "Igama" kwaye ucofe "Kulungile / Thumela".
Buyela kwiprofayile yakho kwaye ujonge ukuba ifonti oyikhethileyo iyazigcina iimpawu obuzilindele. Okuphikisanayo, ungazama ezinye iinketho. Ukuze umxholo wakho ubonakale kwaye ube yimbonakaliso epheleleyo yohlobo lophawu lwakho, sebenzisa utshintsho lweefonti ze-Instagram ngokuthanda kwakho. Khumbula ukuba inkcazo yeprofayile yakho kwi-Instagram yileta yakho yentshayelelo, oko kukuthi, nabani na oyindwendwelayo uya kufumana umbono oqhelekileyo oya kuthi kamva ubakhokelele ekuphononongeni zonke iimpapasho zakho.
Ungayitshintsha phi ifonti
Kwiprofayile yebhayoloji kukho iibrendi okanye iiakhawunti ezitshintsha amagama. Abanye babandakanya iifonti ezahlukeneyo kwinkcazo. Kuphephe ukutshintsha oonobumba kwiiHashtag kwaye soloko ukhetha iifonti ezifundekayo.
Xa uphendula uluvo ungabandakanya iileta ezahlukeneyo, Unokusebenzisa oku xa ubuza imibuzo, i-trivia okanye imidlalo kuba unokubhala iileta ezahlukeneyo kumsebenzisi ngamnye.
Kumabali ungade udibanise uyilo olwahlukileyo kwaye udale amabali anomtsalane ngaphandle kokusebenzisa iinkqubo zoyilo.
kwimiyalezo ethe ngqo Ngale ndlela unokutshintsha amazwi kwi-Instagram kwaye ngaloo ndlela wabelane ngemiyalezo eyenzelwe wena kunye nabalandeli bakho.
Izicelo zokutshintsha ifonti
Kusenokwenzeka esona sicelo sidumileyo sokutshintsha ifonti kwi-Android yi-iFont. Ngofakelo olungaphezulu kwezigidi ezili-10 ngoDlalo lukaGoogle, sisalathiso kudidi lwe usetyenziso olulungeleyo lwe-android, kwaye ngenene yenye yezona ziwuzalisekisa ngcono umsebenzi wayo.
Nje ukuba ufake i-app, uluhlu olukhulu lwemithombo yazo zonke iintlobo luya kuvela kwiscreen. Ifonti nganye ibandakanya ubungakanani bepakethe yokukhuphela ecaleni kwayo, kwaye ikwabonisa ulwimi elungiselelwe yona. Ukongeza, kwiscreen esikhulu siya kufumana iithebhu ezininzi: Kunconyiwe, Khangela kunye neMithombo yam.
Ukuba ufuna ukusebenzisa enye yefonti ecetywe yi-iFont, kufuneka wenze njalo cofa kwenye yazo, kwaye ngokusebenzisa iqhosha elithi "Khuphela" ezantsi, qalisa ukukhuphela kwephakheji ebandakanya ifonti. Ekugqibeleni, nqakraza nje kwi "Faka". Kuxhomekeka kwisixhobo esisetyenziswayo, ifonti inokusetyenziswa ngokuthe ngqo, okanye inokufakwa njengenkqubo, ekufuneka ngoko ikhethwe ngokusetyenziswa kwezicwangciso zefonti kwiisethingi zesixokelelwano.
Nokuba awuzifaki iifonti zoonobumba kwi-Android yakho, iFontBoard app ikwakunceda ukuba utshintshe ifonti ngekhibhodi. Ngokufutshane, i-FontBoard yikhibhodi equlethe 50+ iifonti zasimahla onokuyisebenzisa ukubhala kuWhatsApp, Instagram, Facebook, njl.
Emva kokuba ufake kwaye uvule i-app okokuqala, kuya kufuneka uyinike imvume yokuba ibe yikhibhodi yefowuni yakho. Ukusuka apho, xa utsala ikhibhodi kwi-app, iFontBoard iya kuvela. Ngaphezulu kwebhodi yezitshixo kukho iifonti ezahlukeneyo onokubhala ngazo. Skrolela ezantsi kwibar ukuze ukhethe lowo uthanda kakhulu.
Ungayijonga loo nto ezinye iifonti zivaliwe, kwaye kukuba iFontBoard inoguqulelo oluhlawulweyo onokurhuma ukufikelela kwikhathalogu yayo epheleleyo yeefonti ezinobumba.
Njengakwisicelo sangaphambili, iifonti yikhibhodi yeefonti kunye ne-emojis yeselula yakho ye-Android. Nangona kunjalo, kukho umahluko ocacileyo: Iifonti azinazo iintengiso ezininzi kwaye zonke iifonti zabo zisimahla. Emva kokukhuphela kunye nokufaka i-app, yivule ukuseta njengekhibhodi yefowuni yakho kwaye uyinike iimvume ezifunekayo ukuze isebenze ngempumelelo.
Emva koko, kufuneka uvule ikhibhodi nakwesiphi na isicelo, skrola kwibar ephezulu ukukhetha ifonti oyithanda kakhulu kwaye uqale ukuchwetheza.
Yiloo ndlela ekulula ngayo ukusebenzisa ikhibhodi yeefonti, esebenza kunye ne-WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat kunye nezinye izicelo ezininzi.
Enye indlela edumileyo ye-iFont yiHiFont, isicelo sasimahla esithi, njengale yangaphambili, ikuvumela ukuba uguqule ifonti yeeselfowuni ze-Android, ezinikezelayo. ikhathalogu enkulu yeefonti onokuthi uzikhuphele, uninzi lwasimahla simahla.
Ngokuchaseneyo ne-iFont, iifonti zeHiFont kufuneka zikhutshelwe kwaye zifakwe ngoDlalo lukaGoogle njengosetyenziso oluzimeleyo. Ukwenza njalo kuya kubangela ukuba i-app ngokwayo ijonge ukubona ukuba isixhobo sakho siyakuxhasa na ukutshintsha ifonti, kwaye ukuba kunjalo, iqhosha elikhulu elithi "Faka" liza kubonakala likhethe ifonti osanda kuyikhuphela.
Olu setyenziso, nangona lusebenza kanye njengeFont, kufuneka lube yenye indlela yokujikela kuyo kuphela xa ukhetho lwangaphambili lungasebenzi, kuba olu setyenziso. Inemiqobo ethile ebalulekileyo. Umzekelo, akwenzeki ukuba ungenise ezakho izimbo, kwaye i-app ikwanezibhengezo zentengiso ezithi ngamanye amaxesha zibe nzima kakhulu.
Emva kohlalutyo lwangaphambili kunye nesifundo esifutshane, kufuneka kuqatshelwe ukuba i-Instagram iyonke sisixhobo esiluncedo kakhulu, kungekuphela nje ukusebenzisana kodwa kunye nokuyila. Lifikile ixesha lokuba uqalise ukuphanda ngakumbi kwaye uzame iindlela zayo ezahlukeneyo zobuchule kunye nezicelo esizicebisile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyitshintsha njani ifonti kwi-Instagram